Donald Trump oo ka hadlay weerarka uu wiilkii Soomaaliga ahaa dhawaan ka geystay Jamaacadda Ohio – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Donald Trump oo ka hadlay weerarka uu wiilkii Soomaaliga ahaa dhawaan ka geystay Jamaacadda Ohio
Madaxweynaha la dortey ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa maalintii shalay bartiisa Twitterka kusoo qoray fariin uu uga hadlaayo weerarkii ka dhacay Jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka, kaas oo uu geystey wiil Soomaaliyeed oo Jaamacadda uu weeraray ka ahaa arday.
Donald Trump ayaa sheegay in mas’uuliyada weerarkaas ay qaadatey ISIS, kaas oo uu fuliyay Somaali qaxooti ah oo aysan aheyn in ay joogaan waddankeena Mareykanka ayuu yiri Trump.
Wiilkaasi oo lagu magacaabo C/risaaq Cali Cartan ayaa ahaa wiilka fuliyey weerarka ay ku dhaawacmeen 11 qof, isaguna naftiisi ku waayey, wuxuuna sharci ku joogey dalkaasi Mareykanka, isagoona sidoo kale xilligaasi ahaa arday wanaagsan horeyna wax danbiyo ah aanan u gelin.
Laamaha amniga ee Mareykanka ayaa aminsan inuu weerarkani ahaa “Lone Wolf” oo loo isticmaalo dadka gooni socodka ah kadibna isla hadalka dartiis iyo carro weerarada u geysta, waxaana ardeyda Jaamacaddu sheegayaan in Cartan aanu saaxiibo laheyn.
ISIS ayaa sheegatay inay mas’uul ka tahay weerarkan, mana jiro wax xiriir ah oo dhexmaray ISIS iyo wiilka la dilay ee weerarka fuliyey, iyadoona laamaha amnigu ay arrinkaasi weli baarayaan.
Si kastaba, madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la aaminsan yahay inuu cadaawad isaga qaaday dadka Soomaalida ah, kadib markii uu horey ololihiisa doorashada ku weeraray kuna tilmaamey argagixiso kuwa jooga Minnesota iyo kuwa ku sugan qeybo ka mid ah dalkaasi Mareykanka.